छोरा तैमुरका लागि बडिगार्ड राख्ने करिनाको तयारी ! | Citizen FM 97.5 Mhz
छोरा तैमुरका लागि बडिगार्ड राख्ने करिनाको तयारी !
जन्मनासाथ सेलिब्रिटी हुन्छन्, बलिउडका स्टार किड्सहरु । उनीहरुले खाएको, हिँडेको, हाँसेको, रोएको सबै समाचार बन्छन् ।
अहिले मिडियामा अत्यधिक चर्चा हुने गरेका स्टार किड हुन् सैफ अली खान र करिना कपुरका छोरा तैमुर । उनी दुई वर्ष पनि भएका छैनन्, तर उनको चर्चा कुनै सेलिबि्रटीको भन्दा कम छैन । मिडियाका क्यामराहरु उनको सानो झलकका लागि पनि मरिहत्ते गर्छन् ।
मिडियामा अत्यधिक चर्चा भएपछि मानिसहरुमा क्रेज बढ्ने नै भयो । त्यसैले आजकाल तैमुरलाई जहाँसुकै लिएर हिँड्न पनि बाबुआमालाई कठिन भएको छ । हालै उनकी सुसारेले स्कुल पुर्‍याउने क्रममा केही व्यक्तिहरुले घेरेर उनीसँग सेल्फी खिच्न खोजेका थिए । मानिसहरुले घेरेपछि तैमुर आत्तिएर रोए ।
यसरी छोरालाई बाहिर लिएर हिँड्नै समस्या आउन थालेपछि सैफ अली खान र करिना कपुरले उनको लागि छुट्टै बडिगार्ड राख्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । त्यसपछि तैमुर जहाँ जाँदा पनि बडिगार्डले पछ्याउने छन् र भिडलाई उनको नजिक आउन दिने छैनन् ।
हालै एक अन्तरवार्तामा करिनाले मिडियारुले तैमुरलाई पछ्याएर अनावश्यक दुख दिने गरेको गुनासो गरेकी थिइन् ।
‘लण्डनमा’ साम्राज्ञी र धिरज बाँधिदैछन् बन्धनमा (भिडियोसहित)
२४ घन्टामा दुर्गेश थापाले खेलेको यस बर्षको तीज गीत सेल्फी-४ ( बुलाकीले) तोड्यो रेकर्ड !कति दर्शकले हेरे?पढ्नुहोस
अमेरिकालाई नधम्काउन डोनाल्ड ट्रम्पले चेतावनी
भारतमा लोकसभा चुनाव सुरु
पाकिस्तानी लडाकु विमान भारत पस्यो, कयौँ विमानस्थल बन्द